အလုပ်ဖော်များအတွက်အကောင်းဆုံး $ 10 လက်ဆောင်ပေးမယ်စိတ်ကူးများ - လက်ဆောင်လမ်းညွှန်
ဘယ်လို အခြား Femina ပါဝါအမှတ်တံဆိပ် ဆံပင် အိမ်သုံးဆေးများ မိတ်ကပ် မင်္ဂလာဆောင်ဖက်ရှင် ထုတ်ကုန်များ သတင်း အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု
အလုပ်ဖော်များအတွက် $ 10 အများဆုံးအတွေးအခေါ်လက်ဆောင်ပေးမယ်
သင်၏မိဘများ၊ ကလေးတွေ၊ မောင်နှမများ၊ အခြားသူများနှင့်၎င်းအတွက်လက်ဆောင်များကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်အားလပ်ရက်စျေးဝယ်ခြင်းဖြင့်သင်ပြီးဆုံးသွားပြီဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည် အဖြူဆင်လက်ဆောင်လဲလှယ် မင်းသဘောတူလိုက်ပြီ ထိုအခါမူကားသင်နားလည်သဘောပေါက် - သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုရဖို့ရန်အဘယ်အရာကိုပင်စဉ်းစားကြပြီမဟုတ် (သင်အမှန်တကယ်သင်ရပ်နိုင်သူများ) ။
သင့်ရဲ့သူဌေး၊ အလုပ်ဇနီး၊ အလုပ်လုပ်ခင်ပွန်းလား၊ စန်ဒရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကောင့်ထဲမှပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘဏ်ကိုမချိုးပဲပွဲလမ်းသဘင်ရဲ့လက္ခဏာကိုပြဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီနေရာမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့သေချာတဲ့အလုပ်ဖော်တွေအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ တန်လက်ဆောင်အကြံဥာဏ်တချို့ပါ။
RELATED: ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့နှင့်အနက်ရောင်သောကြာနေ့ - မည်သည့်ပိုကောင်းသောသဘောတူညီချက်များရှိသနည်း။
၁။ Madewell Travel Matte Metallic Glass ဖယောင်းတိုင်
သေချာတာပေါ့၊ ဖယောင်းတိုင်တစ်ခုကသိသာထင်ရှားတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဘယ်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလှပပြီးမွှေးကြိုင်စေချင်တာလဲ။ Plus အား, ဒီအထူးသဖြင့်နံပါတ်၏ matte ဒီဇိုင်းကိုဒါကြောင့်သာ $ 10 ရဲ့ယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းသည်ဇိမ်ခံနှင့်ဇိမ်ခံကား။
ဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၀)
၂။ Starbucks ချောကလက်နှစ်မျိုးဖြစ်သောကိုကိုးအရောအနှော
သူတို့ကိုအရသာရှိသောကိုကိုးခွက်မှတစ်ဆင့်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်နွေးထွေးသောပွေ့ဖက်မှုကိုပေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် IRL အလုပ်ခွင်တွင်ပွေ့ဖက်ခြင်းသည်အဆင်မပြေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီးမကြာခဏဆိုသလို HR မှအတည်ပြုခြင်းမခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဝယ်ပါ ($ 7)
3. Anthropologie အဆိုးမြင် Monogram ခွက်
ဒီစိတ်ကြိုက်ခွက်ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြင်ရုံသာမကရုံးသုံးအိုးခွက်သူခိုးတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးမှာပါ။ (မင်းဘယ်သူလဲသိလား ... )
၄။ သခွားသုတ်ဆေးစက္ကူမျက်နှာဖုံး (၂ အထုပ်) အတွက်ဟုတ်ကဲ့။
ဝယ်ပါ ($ 3)
5. Mario Badescu မျက်နှာမှုန်ရေမွှား
ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ပါ၊ ဒီဟာ desktop လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။ ဤပြန်လည်ရှင်သန်လာသည့်သခွားသီးနှင့်လက်ဖက်စိမ်းအမှုန်တစ်ခုသည်မွန်းတည့်နေသည့်အချိန်တွင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးမဆုတ်မနစ်သောရုံးအပူပေးစက်၏အရေပြားခြောက်သွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတန်ပြန်လိမ့်မည်။
6. ရိုင်ဖယ်စက္ကူ Co. , Great Things Notepad
ဝယ်ပါ ($ 8)
(၇) Fashioncraft Snowflake ဝိုင်ဘူးအဆို့
အမေဇုံမှာ $ 7
၈။ Zak ကသံမဏိထည်ဒီဇိုင်း
၉။ MOSISO Silicone Keyboard Cover
ရောင်စုံ keyboard အဖုံးနှင့်သူတို့၏အလုပ်နေရာကိုဂျက်ဇ်ဂီတ။ သူတို့ရေဘူးကို ၉၀၀ ကြိမ်ခေါက်သောအခါသူတို့ကျေးဇူးတင်ကြသည်။
၁၀။ ဒေါက်တာ PAWPAW မူရင်းရှင်းလင်းသောဘက်စုံသုံးဆေးပြား
နှုတ်ခမ်းကွဲလား ကျနော်တို့သူမ၏မသိရပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ခြောက်သွေ့သောဆောင်းရာသီများ၌လူတိုင်းသည်သူတို့၏စားပွဲခုံထဲတွင်ရှိနေရန်အပိုနှုတ်ခမ်းနီတစ်မျိုးသုံးနိုင်သည်။
သက်ဆိုင်သော: အားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံး Tech Websites 5
Categories ထုတ်ကုန်များ နိုင်ငံတကာ Celeb စတိုင်